एमडी अबु स्याम साइबरसुरक्षाको बारेमा कुरा गर्छन् - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी मार्केटप्लेस समाचार
मार्च 30, 2021 मार्च 29, 2021 एमडी अबु स्याम एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश, बंगलादेश फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, बंगलादेश थोक र B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार
इन्टरनेट एकदम शक्तिशाली चीज हो तर यसमा केही कमजोरीहरू पनि छन्।
बंगलादेश एउटा सानो देश हो, तर यसको सरकारसँग धेरै संगठनहरू र टोलीहरू छन् जसले साइब्रेट्याक्सलाई रोक्न मात्र काम गर्दछन्।
र तिनीहरू शक्तिशाली आक्रमणहरू रोक्नको लागि पर्याप्त बलिया छन्।
त्यसोभए, हामी जान्दछौं कि तपाईं एक टेक ब्लगर हुनुहुन्छ जसले साइबर सुरक्षा र अन्य सामानहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ। के तपाई हामीलाई आफ्नै बारेमा बढि बताउन सक्नुहुन्छ?
“ठिकै छ, म जहिले पनि मेरो जन्म देखि टेक्नोलोजी मा रुचि थियो। पछि मलाई साइबर सुरक्षाको बारेमा थाहा भयो र मैले यसलाई अझ चाखलाग्दो पाए। ”
तपाइँलाई साइबरसुरक्षामा कुन कुराले रोचक बनायो र तपाइँ यसको बारे कसरी सिक्नुभयो?
“तपाईंलाई थाहा छ इन्टरनेट एकदम शक्तिशाली चीज हो तर यसमा केही कमजोरीहरू पनि छन्। हरेक दिन धेरै साइब्रेट्याक्स गरिन्छ। त्यसोभए, म यी साइब्रेट्याक्सबाट कसरी सुरक्षित रहन सक्छु भनेर जान्न चाहन्थें। र यो जिज्ञासाले मलाई साइबर सुरक्षामा चासो देखायो। यसका बारे जान्नको लागि मैले धेरै अनलाईन पाठ्यक्रमहरू गरें र अनलाइन अनुसन्धान गर्ने मेरो बानीले मलाई साइब्रेट्याक्स र साइबरसुरक्षाको बारेमा अधिक अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्यो। ”
तपाईंले साइब्रेट्याक्सबाट सुरक्षित रहनको लागि तपाईंले साइबरसुरक्षा सिक्नु भएको भन्नुभयो। त्यसोभए, के तपाई सोच्नुहुन्छ कि हरेक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले साइबरसुरक्षा सिक्नु पर्छ?
"मलाई लाग्दैन कि सबैले साइबरसुरक्षाको बारेमा सबै कुरा जान्नु पर्छ। तर तिनीहरूलाई अनलाइन सुरक्षित रहनको लागि आधारभूत कुरा थाहा हुनुपर्दछ। "
डिजिटलाइजेशनका लागि सर्ने प्रवृत्तिका साथ, संगठनहरूले धेरै संवेदनशील जानकारी पनि उत्पादन गरिरहेका छन् जुन साइबर-हमलाको प्रवण रहन्छ।
तपाईं बंगलादेशबाट आउनुभएको हो जुन सानो देश हो। बंगलादेशी सरकार हो। साइब्रेट्याक्स रोक्न काम गर्दै हुनुहुन्छ?
“बंगलादेश एउटा सानो देश हो, तर यसको सरकारसँग धेरै संस्था र टोलीहरू छन् जसले साइब्रेट्याक्सलाई रोक्न मात्र काम गर्दछन्। र तिनीहरू शक्तिशाली आक्रमणहरू रोक्नको लागि पर्याप्त बलिया छन्। ”
यो राम्रो समाचार हो कि बंगलादेश जस्ता सानो देशले पनि शक्तिशाली आक्रमणको बिरूद्ध बचाउन सक्छ। तर नागरिकहरू पनि साइब्रेट्याक्सका बारे सचेत रहन आवश्यक छ, हैन? कति बंगलादेशी नागरिकहरू साइब्रेट्याक्सका बारे सचेत छन् र साइबरसुरक्षाको बारेमा उनीहरूलाई कति थाहा छ?
"हो, मानिसहरूलाई साइब्रेट्याक्स बारे पनि सचेतना चाहिन्छ। तर बंगलादेशीहरु अझै साइबर सुरक्षा को बारे मा धेरै थाहा छैन। त्यसोभए, सरकार जागरूक मानिसहरूलाई विभिन्न प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने योजना गर्दछ।
गत वर्ष बंगलादेशको पहिलो अनलाइन ई-जागरूकता ओलम्पियाड आयोजित गरिएको थियो। म पनि यसको एक हिस्सा थियो। मलाई लाग्छ कि कार्यक्रमले धेरै किशोर-किशोरीहरूलाई साइब्रेट्याक्सबारे सचेत रहन मद्दत गर्‍यो। ”
साइबरसुरक्षा सिक्न चाहने नयाँ व्यक्तिहरूका लागि तपाईंको सुझाव के हुनेछ?
“मैले पहिले भनेझैं इन्टरनेट शक्तिशाली चीज हो। जो कोहीले नि: शुल्क इन्टरनेट प्रयोग गरेर केहि पनि सिक्न सक्दछ। त्यसोभए यदि कसैलाई साइबरसुरक्षामा रुचि छ उसले वा उसले पहिले अनलाइन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यहाँ धेरै कार्यक्रम र कोर्सहरू नि: शुल्क उपलब्ध छन्। ”
साइबरसुरक्षाको बारेमा स्यामसँग कुराकानी गर्न एकदम राम्रो दिन थियो। जस्तै उनले भनेका छन्, सबैलाई अनलाइन सुरक्षित रहन साइबरसुरक्षाको मूल कुरा थाहा हुनुपर्दछ। त्यसोभए, तपाईं साइब्रेट्याक्सका बारे पनि सचेत हुनुपर्दछ र साइबरसुरक्षाको बारेमा केही ज्ञान लिनुपर्दछ। तपाईं अनलाइन साइबरसुरक्षाको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ वा स्यामको ब्लग भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ TechneSiyam उहाँबाट सिक्न।
ब्लगर सांप्रदायिक समाचार cybercrime cybersecurity प्रविधि
एमडी अबु स्याम
नमस्ते, म स्याम हुँ। मँ एक ब्लगर, YouTuber र विद्यार्थी हुँ।
क्याम्पिंग अघि Before चीजहरू जान्नु